Izindiza ezintsha ezisuka e-Bangkok ziya e-Phnom Penh nge-Bangkok Airways
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Transportation » Izindiza ezintsha ezisuka e-Bangkok ziya e-Phnom Penh nge-Bangkok Airways
Namuhla i-Bangkok Airways ihlele umcimbi wokwamukela ukwamukela izinsiza zayo eziqondile zamazwe ngamazwe phakathi kwe-Bangkok (Suvarnabhumi) ne-Phnom Penh (Cambodia) ukuze kusekelwe iphrojekthi yokuvulwa kabusha kwe-Thailand nokuthuthukisa imikhakha yezwe yezokuvakasha nezamabhizinisi. Indiza yokuqala engu-PG931 ifike e-Phnom Penh International Airport ngo-10.05 amahora.
Indiza ye-PG 931 yamukelwe ngemfudumalo izivakashi ezivelele zaseCambodia ezihlanganisa u-HE Sao ​​Wathana, uMqondisi Wesikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe Sase-Phnom Penh (uNobhala Wezwe) kanye Nomeluleki Wakho ka-HE Dkt Minister (5th ukusuka kwesokudla) kanye noMnu. Mayoon Udom, uMphathi Wesiteshi saseBangkok Airways Public Company Limited (4th kusuka kwesobunxele).
Izinsizakalo eziqaliswe kabusha phakathi kweBangkok (Suvarnabhumi) nePhnom Penh (Cambodia) zisetshenziswa yindiza ye-Airbus A320, eqala ngezindiza ezine ngesonto (ngoMsombuluko, ngoLwesithathu, ngoLwesihlanu, nangeSonto) futhi zizokwenyuswa zibe indiza yansuku zonke kusukela mhla ziyi-16 kuZibandlela wezi-2021 – 26 March 2022. Indiza ephumayo engu-PG931 isuka e-Bangkok (Suvarnabhumi International Airport) ngo-08.50hrs. futhi ifika e-Phnom Penh International Airport ngo-10.05hrs. Indiza engenayo i-PG932 isuka esikhumulweni sezindiza i-Phnom Penh International ngo-10.55hrs. futhi ifika eBangkok (Suvarnabhumi International Airport) ngo-12.10hrs.
I-Bangkok Airways ilandela ngokuqinile izinyathelo zokuphepha ngokumelene ne-COVID-19, okuhlanganisa ukubulala amagciwane nokuhlanza izindawo ezibalulekile ezifana nezindawo zokubala zokungena nezindawo zokuphumula abagibeli. Izinhlelo zokuqapha nokuvikela zenkampani yezindiza zilandela izindinganiso nemihlahlandlela yoMnyango Wokulawula Izifo, uMnyango Wezempilo Yomphakathi, kanye ne-Civil Aviation Authority yaseThailand (CAAT).
Airbus Airport zezindiza Bangkok Bangkok Airways Isiphathimandla Sezindiza SaseThailand Company Phnom Penh Thailand
Izivakashi ezivela ePoland: ISeychelles isicishe isilungele imakethe entsha!
I-Guam Visitors Bureau iqala kabusha Isevisi yamahhala ye-Guåhan Trolley
I-Ethiopian Airlines Group iqoke isikhulu esisha...
I-Global Dairy Processing Equipment Usayizi Wemakethe...
Imakethe ye-Premixes eyenziwe ngokwezifiso yango-2022 Yokuthuthukiswa Komhlaba...
Abantu baseRussia basabela kanjani ezijezisweni zaseNtshonalanga?
IRosewood Hotels & Resorts iza eNaples, eFlorida
Ihhotela elisha livula enhliziyweni ye-LA's Sunset Strip
I-Union Bay Seafood Pacific Oyster iyakhunjulwa ngenxa ...
I-Jamaica Yamukela “Ama-Hot Ones Caribbean”
Imakethe Yezinto Ezimuncu Zokudla Ngamathuba Akhazimulayo...
I-Tourism Seychelles Itshela I-Travels Tales yayo ku-ATM ...
Wazalelwa ukuba Wild eLaconia Motorcycle Week
Indiza Engami isuka eChicago Midway iya e-Tweed-New Haven...
Ihhotela laseSan Antonio u-Emma uqamba uMphathi-Jikelele omusha￼
I-HIV Yomjovo Esebenza Isikhathi Eyokuqala Futhi Kuphela...
I-Metformin Eye Drops yokwelashwa kwe-Macular...